किन हामीलाई - AlorAir
म एक Dehumidifier किन चाहिन्छ?
प्रविधिमा अग्रिम मात्र अगाडि समाज धक्का छैन, तर पनि मर्मतका हाम्रो जागरूकता उठाउनु। यो एक उच्च दक्षता dehumidifier, हावा को dehumidification मानिसहरूलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ साथै भविष्यमा मर्मतका लागत कम भन्ने हो। उदाहरणका लागि, अतिरिक्त चिस्यान एक भवन को संरचना र घटक गर्न महँगो क्षति गर्न सक्छ।
अतिरिक्त चिस्यान एक व्यक्तिको कार्यस्थल वा जीवित वातावरणमा उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले एक प्राकृतिक घटना हुन लाग्यो गर्दा, हामी अब हामी अतिरिक्त चिस्यान को हानिकारक प्रभाव रोक्न सक्छ भनेर थाह छ।
► अत्यधिक चिस्यान देखि आउँछन् कहाँ?
हावा तापमान आधारमा, हावा एक बाफ अवस्थामा पानी केही मात्रामा पकड गर्न सक्छन्। हावा ठंडा गर्दा, पानी पकड यसको क्षमता तदनुसार घट्छ। यो हावा हामी परिचित छन् को dampness र संक्षेपण सिर्जना जो चिसो सतह, गर्न अतिरिक्त चिस्यान विज्ञप्ति भन्ने हो।
► अत्यधिक चिस्यान लागि Dehumidifiers किन छनौट?
* स्ट्रक्चरल क्षति
काठ संरचना मोल्ड र क्षय हुनु गर्न susceptible छन्। अधिक समय मोल्ड र क्षय हुनु यस्तो विकृत फर्श र असमान ढोका फ्रेम रूपमा विषयहरूका गर्न सक्छ।
काठ भागहरु लागि मरम्मत को 15% क्षय हुनु र मोल्ड कारण छन्। यो आगो द्वारा क्षतिग्रस्त छ के भन्दा बढी छ, जो नष्ट भइरहेको काठ को बारेमा 20 अर्ब खुट्टा, गर्न जान्छ।
बाहिरी पर्खाल सजिलै आफ्नो सतहहरु मा चिस्यान अवशोषित गर्न सक्छन्। सतह तापमान अझ कम हुँदा अतिरिक्त पानी, एक हानिकारक चक्र गर्न प्रमुख अवशोषित छ।
Dehumidifier वातावरण बाट अत्यधिक चिस्यान निकाल्न र उपयुक्त चिस्यान स्तर मा सामाग्री राख्न मद्दत गर्नेछ। यो मर्मतका खर्च कम गर्न र न्यूनतम मा मोल्ड क्षति राख्न मद्दत गर्छ।
धातु को जंग अक्सर किनभने अतिरिक्त चिस्यान को हुन्छ। तिनीहरूले हावा बाट धेरै चिस्यान अवशोषित यदि घरेलू बिजुली उपकरण र बिजुली घटक सञ्चालन गर्न सक्दैन। भोजन, दबाइ, किताब, र लुगा पनि बिगार्न कमजोर छन् र dampness देखि ढुसी लागेको बन्न सक्छ।
Dehumidifier तपाईंको भण्डारण समस्या सबै एक व्यापक समाधान प्रदान गर्न सक्छन्। एक कुशल, छिटो अभिनय AlorAir Dehumidifiers प्रयोग गरेर आफ्नो सम्पत्तिमाथि सबै ठीक हेरचाह छन् भन्ने सुनिश्चित गर्दछ।
* किरा Infestations
नम वातावरण अत्यधिक यस्तो दीमक, चींटियहरुलाई, र Cockroaches रूपमा किरा, गर्न आकर्षक छन्, अक्सर आफ्नो घर एक विस्तारित अवधिको लागि असंसूचित बाँचिरहेका छौं। यी किरा infestations आफ्नो घर र स्वास्थ्य गर्न व्यापक क्षति हुन सक्छ।
Dehumidifier सजिलै आफ्नो रहन र काम स्पेस को लागि सहज चिस्यान स्तर कायम राख्न सक्छौं। सुक्खा र सहज हावा परिसंचारी गरेर, तपाईं किरा infestation कम र हावा गुणस्तर सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।
60 वा उच्च% को भित्री सापेक्षिक आर्द्रता स्तर निकै जो काठ, माटो, गत्ता, र कागज मा फलाउन मोल्ड, फफूंदी, र Fungi को संभावना, वृद्धि हुनेछ।
मोल्ड सर्छ, यो हावा मा spores लाखौं विज्ञप्ति। यो खतरनाक स्वास्थ्य अवस्था जोखिम बढ्दै बाहेक, बासी, र अप्रिय odors गर्न जान्छ।
एक dehumidifier प्रभावकारी इन्डोर चिस्यान कम गर्न सक्छन्, आफ्नो रहन वातावरण थप सहज बनाउन र गम्भीर रोग को मौका कम।
हामी नया गर्न प्रेम!
AlorAir Dehumidifiers मार्फत उन्नत IAQ र dehumidification समाधान, हावा आवागमन, हावा scrubbers, र धेरै को एक श्रृंखला प्रदान गर्दछ। हाम्रो नवीन उत्पादन औद्योगिक देखि आवासीय गर्न लिएर धेरै आवेदन मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। हाम्रो मिशन कहिल्यै हामी हाम्रो ग्राहकहरु गर्न प्रदान उत्पादनहरूमा innovating रोक्न छ।
► विकसित Coils उच्च COP सिर्जना
AlorAir Dehumidifiers मा coils एक पारंपरिक dehumidifier को coils भन्दा ठूलो हो। यसबाहेक, यस तार र फिन डिजाइन सस्ता, असङ्ख्य उत्पादन Dehumidifiers मा फेला परेन गर्न सकिन्छ भनेर अद्वितीय सुविधाहरू समावेश छ। को ओभरसाइजगरिएको तार र गर्मी एक्सचेंजर एक पारंपरिक dehumidifier रूपमा प्रति किलोवाट धेरै चिस्यान रूपमा 2-3 पटक हटाउन सक्नुहुन्छ। AlorAir गरेको अत्यधिक कुशल dehumidifier ऊर्जा लागत मा $ 250 प्रति वर्ष सम्म बचत र सामान्यतया एक पाँच वर्ष सीमित ग्यारेन्टी संग 10+ वर्ष पछिल्लो हुनेछ।
Coils मा ► Epoxy पाउडर कोटिंग
Freon रिसाव बच्नको लागि, एक dehumidifier लागि घातक दोष, AlorAir epoxy लेपित coils शुरू भएको छ। यो नवीन सुविधा संक्षारक वातावरण विरुद्ध सुरक्षा प्रदान र तार गरेको गर्मी transferability कायम राख्ने द्वारा coils को जीवन को विस्तार। यसबाहेक, उच्च दक्षता रोटरी खुम्च्याउने कम सम्भव मूल्य मा अधिकतम प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्दछ।
► भारी ड्युटी condensate पंप्स
पंप अक्सर यस्तो तात्दै, पत्ता लगाउने विफलता, र rusting रूपमा गम्भीर मुद्दाहरू छन्। Luckily, हाम्रो ईन्जिनियरहरु धेरै विश्वसनीय छ कि एक पंप विकास गरेका छन्। एक 20 'उठाने दूरी संग, condensate पंप तपाईं कहिँ सकिन गर्न स्वतन्त्रता दिन्छ।
AlorAir गरेको condensate पम्प मा केबल द्रुत जडान प्लग छ। यो स्थापना र मर्मतका छिटो र सजिलो बनाउँछ।
आन्तरिक अवयव छिटो पहुँच ►
सबै AlorAir Dehumidifiers आन्तरिक घटक पहुँच प्रदान गर्नुहोस्। तूफान श्रृंखला वृहत शृंखला पहुँच प्यानल संग सुसज्जित छ, जबकि एक clamshell आवरण छ। साथै, पम्प द्रुत जडान केबल छ, त्यसैले यसलाई सजिलै नियन्त्रण बोर्ड पहुँच बिना हटाउन सकिँदैन।
► रिमोट कन्ट्रोल Humidistat
हाम्रो रिमोट humidistat AlorAir Dehumidifiers आदर्श विकल्प, एकाइ अर्को कोठा मा ducted गरिनेछ जब बनाउँछ। को humidistat पनि वैकल्पिक वाहिनी माउन्ट flanges, एक ducting सिस्टम जडान गर्दा स्थापना समय कम जो विशेषताहरु।
बाइपास एयर डिजाइन संग ► सेन्सर
सबै AlorAir Dehumidifiers छोटो साइकलको रोक्छ जो बाइपास एयर डिजाइन, एक चिस्यान सेन्सर समावेश गर्नुहोस्। सेन्सर सजिलै तिनीहरूलाई वा बन्द शक्तिमा गलत संकेत प्राप्त गर्न खतरा बनाउन, आन्तरिक गर्मी र चिस्यान प्रभावित गर्न सकिन्छ। बारी मा, यो खुम्च्याउने को आयु shortens र सर्द सिस्टम अस्थिर बनाउँछ। यो मुद्दा लड्न गर्न, बाइपास एयर डिजाइन सेन्सर पूर्ण आन्तरिक गर्मी र चिस्यान देखि अछूता गर्न अनुमति दिन्छ।
► हराउननसकिने मुख्य बोर्ड प्रदर्शन
मुख्य बोर्ड नाटकीय आफ्नो dehumidifier को प्रदर्शन असर गर्न सक्छ। यस कारण, सबै AlorAir सर्किट बोर्ड सुरक्षाको लागि लेपित छन्। बोर्ड ट्याम्पर प्रमाण र चुम्बक गर्न प्रतिरोधी छ। को भागहरु र प्रत्येक बोर्ड को प्रदर्शन हो 100% परीक्षण गरे।
► Ductable एकाइ बनाउँछ तपाईंको जीवन सजिलो
Dehumidifiers को AlorAir परिवार आवेदन को एक विस्तृत विविधता लागि सामान प्रदान गर्दछ। को वाहिनी किरा अनुमति एकाइहरु यस्तो यांत्रिक कोठा रूपमा, एक रिमोट स्थानमा राखिएको, र घर मा अर्को कोठा बाट नियन्त्रण। केही आवेदन मा एक रिमोट humidistat आवश्यक हुन सक्छ।
कसरी AlorAir तपाईं सुरक्षित मुद्रा?
आफ्नो घर मा चिस्यान स्तर नियन्त्रणमा आफ्नो घर, स्वास्थ्य, र परिवार सुरक्षा गर्न महत्वपूर्ण छ। एक AlorAir dehumidifier आफ्नो चिस्यान समस्या एक किफायती समाधान छ। उच्च इनडोर वायु गुणस्तर मा प्रारम्भिक लगानीको ऊर्जा बचत को केहि वर्ष पछि पुन: प्राप्त गर्न सकिन्छ।
AlorAir गरेको Dehumidifiers को उच्च COP तपाईं पारंपरिक Dehumidifiers तुलना ऊर्जा लागत मा $ 250 बचत गर्न सक्नुहुन्छ। एक AlorAir dehumidifier सामान्यतया 10+ वर्ष पछिल्लो र पाँच वर्ष सीमित ग्यारेन्टी आउँछ हुनेछ। एक अनुमान बचत वातानुकूलन खर्च कम देखि व्यय छ। एक पटक तपाईं 50% वा कम को एक लगातार सापेक्षिक आर्द्रता कायम गर्न सक्षम छन्, तपाईंको एचभिएसि आरामदायक तापमान राख्न रूपमा कडा परिश्रम गर्न हुनेछैन।
एक AlorAir dehumidifier आफ्नो लगानी मात्र होइन ऊर्जा बचत प्रदान गर्नेछ तर, यो पनि एक अधिक आरामदायक र स्वस्थ रहन ठाँउ सिर्जना गर्नेछ।
नयाँ Uzit पुन: प्रेषण
पुनर्स्थापना र सफाई को लागि AlorAir गरेको पोको यन्त्रहरू:
सबै भन्दा राम्रो समाधान पत्ता जटिल र अनुभवहीन खरिदकर्ताहरूको लागि भ्रामक गर्न सकिन्छ। AlorAir गर्न धेरै बहाली प्याकेजहरू विकास भएको छ:
1 पानी क्षति पुनर्स्थापना
2. गति मोल्ड remediation
3. तल पछि-बाढी मर्मतका शुल्क कट